Gaadiidka Xad-dhaafka loo Raro Oo Laga Mamnuucay Dekada Muqdisho.(Sawiro) – Heemaal News Network
Taliska Ciidanka Booliska gaar ahaan Hoggaanka Canshuuraha ayaa soo saaray amaro loogaga mamnuucayo dekeda Muqdisho gadiidka qada xamuulka xaddhaafka ah.
Taliyaha Hoggaanka Canshuuraha ee Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sarreeye Guuto Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa sheegay in la joojiyey in Dekadda Muqdisho uu ka baxo Gaadiid Rarkiisa uu Xad dhaaf yahay, in Gaari Waqtigiisa dhammaaday Dekadda uu ka qaado Badeeco iyo Jididka gaadiidka ay u maraan sidii loogu talo galay.
“Laga Bilaabo maanta waxaa la joojiyey in Dekadda uu ka baxo Gaadiid rarkiisa uu xad dhaaf yahay, Gaari Waqtigiisa uu dhammaaday iyo in wadooyinka siddii loogu talo galay loo maro, Ganacsatada waxay naga codsadeen in Gaariga markuu ka baxo Dekadda ilaa iyo uu ka tagayo goobtii loogu talagalay in amnigiisa la sugo, waana ka aqbalnay” ayuu yiri Gen. Bariise
Amaradan ayaa yimid kadib kulan ay ku yeesheen dekeda magaalada Muqdisho Guddi ay ku mideysan yihiin Ganacsatada iyo Gaadiidleyda Soomaaliyeed iyo Taliyaha Hoggaanka Canshuuraha ee Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo uu wehliyaan Taliyaha Hoggaanka Ilaalada Nabad gelyada wadooyinka, Taliyaha Saldhiga Booliska Dekadda iyo Saraakiil kale.
Maxamed Xirsi Xaashi oo ah Afhayeenka Guddiga Ganacsatada iyo Gaadiidleyda Soomaaliyeed, ayaa Dowladda ugaga mahad celiyey suurto gelinta ay suuro gelisay in ka badan 28 sano kadib in xilli habeen ah ay shaqeyso Dekedda magaalada Muqdisho, waxaana uu tilmaamay in ay diyaar u yihiin ka qeyb qaadashada Horumarka dalka.
Muqdisho Oo Ku Waabariisatay Qarax Khasaare Gaystay
Waabarigii hore ee saakay ayaa lagu waramayaa in degmada Hodan ee gobolka Banaadir ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya uu kula qarxay gaari yar oo ay wateen oo marayay xaafadda loogu magac-daray Galmudug. Goobjoogayaal ayaa warbaahinta […]
Xildhibaano katirsan Aqalka sare ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay tagaan xarumaha maamul goboleedyada dalka si ay xal uga gaaraan khilaafka u dhaxeeya dowlada Federaalka iyo maamul goboleedyada. Qoraal kasoo baxay Gudoomiyaha […]